အချောဆုံး မျက်နှာပိုင်ရှင်တွေပါလို့ Plastic Surgery ဆရာဝန်တွေကိုယ်တိုင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ Idol (7)ယောက် | Asia News Bar
အချောဆုံး မျက်နှာပိုင်ရှင်တွေပါလို့ Plastic Surgery ဆရာဝန်တွေကိုယ်တိုင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ Idol (7)ယောက်
တောင်ကိုရီးယားရဲ့ Idol တွေဟာ ရုပ်ရည်ရူပကာနဲ့ ပက်သက်ရင် အားလုံးက ချောမောလှပတဲ့ Star တွေချည်းပါဘဲနော်။ ဘယ်သူက အချောဆုံးလည်းဆိုတာ သတ်မှတ်ဖို့ သာမာန်လူတစ်ယောက်ကို ဆုံးဖြတ်ခိုင်းရင် လွယ်လွယ်နဲ့ ဆုံးဖြတ်နိုင်မယ် မထင်ပါဖူး။ ဒါပေမဲ့ ရုပ်ရည်ပိုင်းကို အကဲဖြတ်နိုင်တဲ့ ကျွမ်းကျင်သူတွေကို ကြည့်ခိုင်းရင်တော့ အဖြေထွက်နိုင်ပါတယ်။
Mnet ရဲ့ TMI News က တော့ ဒီကိစ္စကို သေချာ research လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Show ရဲ့အပိုင်း 60 မှာ ပလပ်စတစ် ဆာဂျရီ ဆရာဝန်တွေကို clients တွေ လိုက်ခွဲစိတ်ကြည့်ချင်ဆုံးမျက်နှာက ဘယ်လိုမျိုးလည်း ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို မေးခဲ့ပါတယ်။ “Face Wannabe Stars” ဆိုတဲ့ list ကို TMI News က လုပ်ပေးခဲ့ပြီး ဆရာဝန်တွေကလည်း သူတို့ရဲ့ Top pick (7) ယောက်ကို ရွေးချယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘာကြောင့်ရွေးချယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ခုလို တွေရှင်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။
7. EXO’s Sehun
ဒီ List ကို အရင်စ ပြောရရင်တော့ EXO အဖွဲ့ရဲ့ အငယ်ဆုံးလေး Lead Dancer “Sehun” အကြောင်း ပြောရမှာပါ။ သူ့ရဲ့ အနုပညာအရည်အချင်းတွေကြောင့် Kpop idol တွေထဲမှာ နာမည်ကြီး idol ဖြစ်သလို SM Entertainment ရဲ့ Visual တွေထဲက တဦးအဖြစ် Sehun က နာမည်ကြီးပါတယ်။ Sehun မှာ V shape ပုံ မေးရိုးသွယ်သွယ်ရှိတဲ့အပြင် နှာတံလေးကလည်း စင်းနေတဲ့အတွက် တော်တော်ချောတဲ့မျက်နှာပါလို့ Plastic Surgeon တွေက ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
6. BTS’ Jin
BTS အဖွဲ့ရဲ့ အသက်အကြီးဆုံး member ဖြစ်တဲ့ Jin ကတော့ အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် နုပျိုချောမောသူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ မျက်နှာသွင်ပြင်ဟာ ဂရိနတ်ဘုရား Zeus နဲ့ တူပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ “golden ratio” လို့ဆိုတဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ မျက်နှာအချိုးအစား ပိုင်ဆိုင်ထားသူပါလို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ထောက်ပြထားကြပါတယ်။
Goblin, Mystic Pop-Up Bar စတဲ့ ဇာတ်ကားတွေနဲ့ နာမည်ရလာတဲ့ မင်းသား Yoo Sungjae ကတော့ Kpop ဘက်မှာဆိုရင် BTOB အဖွဲ့ရဲ့ vocalist ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်လို့ဖွယ်ရာ သွင်ပြင်ရှိတဲ့အပြင် သူ့ရဲ့ မျက်လုံးပုံစံကြောင့် ဒီစာရင်းထဲမှာပါလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ မျက်ရစ်နှစ်ထပ်ဟာ အရမ်း unique ဖြစ်ပြီး ထိုကဲ့သို့ လိုက်ခွဲစိတ်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဖူးလို့ Plastic Surgery ဆရာဝန် တွေက ဆိုပါတယ်။
နောက်ထပ် မျက်လုံးနဲ့တင် အရမ်းဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မင်းသားကတော့ “Son of Netflix” လို့ တင်စားထားကြတဲ့ Song Kang ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မျက်လုံးအတိုင်း လိုက်ခွဲစိတ်လိုတဲ့သူတွေက များတယ်လို့ ဒီ show မှာ ပါတဲ့ Plastic surgeon “Ham Gi Won” က ဆိုပါတယ်။ Song kang ရဲ့ မျက်နှာ ပုံစံက Yook Sungjae နဲ့ Cha Eun Woo တို့ စပ်ပြီး ထွက်လာတဲ့ မျက်နှာပုံစံလို့ ထပ်ချီးမွမ်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
BTS အဖွဲ့ဝင် V ရဲ့ မျက်နှာကတော့ အနောက်တိုင်းနဲ့ အရှေ့တိုင်းစပ်ထားတဲ့ သွေးနှော မျက်နှာပုံစံမျိုးလို့ ဆိုပါတယ်။ Plastic Surgery ဆရာဝန် “Ham Gi Won” ပြောချက်အရတော့ သူတို့ရဲ့ လူနာတွေက V ရဲ့ပုံကိုပြပြီး လာလာခွဲစိတ်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ V ရဲ့ မျက်နှာပုံစံကို လိုက်တုပပြီး ခွဲစိတ်ရတာ အရမ်းခက်ခဲတဲ့အတွက် ပြန်ငြင်းလွှတ်ရပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီ List ထဲက idol တွေထဲမှာ Seo Kang Joon ရဲ့ မျက်လုံးပုံစံလိုမျိုး ခွဲစိတ်ပေးဖို့ အတောင်းဆိုခံရဆုံးပါလို့ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်က ဆိုပါတယ်။
ဒီ မင်းသားရဲ့ မျက်ဆံက အညိုနုရောင်လေးရှိပြီး အားလုံးက မျက်ကပ်မှန်တပ်ထားတယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့နဂိုမျက်လုံးက ဖန်လုံးလေးလို တောက်ပနေတာဖြစ်ပြီး မျက်နှာသွင်ပြင်ကလည်း ယောကျာ်းပီသတဲ့ ရုပ်ရည်ရှိပါတယ်။ V လိုဘဲ ဒီမင်းသားရဲ့ ပုံပြပြီး ခွဲစိပ်ဖို့ လာလာညှိနှိုင်းကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Cha Eunwoo က ဒီ List ရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာရှိနေတာ အံ့ဩစရာတော့မရှိပါဖူး။ တောင်ကိုရီးယားရဲ့ “Face Genius” လို့ တင်စားထားကြတဲ့ Eun Woo ဟာ ယောင်္ကျားလေးတွေ လိုက်ခွဲစိတ်ချင်ကြဆုံး မျက်နှာပိုင်ရှင်ပါလို့ ပလပ်စတစ်ဆာဂျရီ ဆရာဝန်တွေက ဆိုပါတယ်။ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ Eun woo ရဲ့ မျက်နှာဟာ ပြီးပြည့်စုံလွန်းတဲ့အတွက် ဘာကြောင့် Top 1 ဖြစ်နေသလည်းဆိုတာ အထူးတလည် ရှင်းပြစရာတောင်မလိုတော့ပါဖူး။ ခွဲစိတ်ဆရာဝန် Dr.Ham က တောင် “ကျွန်တော် သူ့မျက်နှာကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာ အရမ်းအံ့ဩသွားတယ်” လို့ဆိုပါတယ်။ သူ့ရဲ့မျက်နှာက တကယ်ပြီးပြည့်စုံတယ်လို့ အထပ်ထပ်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
TMI News က လည်း Eunwoo ရဲ့ ငယ်ဘဝကပုံတွေကနေ ခု လက်ရှိပုံတွေအထိ ချပြခဲ့ပါတယ်။ ငယ်ငယ်လေးကနေ ခုထိ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲ ချောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် သဘာဝအတိုင်းချောတဲ့သူဆိုတာ အကုန်လုံးက လက်ခံကြပါတယ်။
Next Gong Jun နဲ့ Zhang Huiwen ကို ဝေဝေဆာဆာချီးကျူးခဲ့တဲ့ “The Flaming Heart” ရဲ့ ဒါရိုက်တာကြီး »
Previous « အစီအစဉ် ၁၁ နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အ​နေနဲ့ မိသားစုဓါတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ကြတဲ့ Running Man အဖွဲ့ဝင်များ
Kpop လောကထဲက ပြောမနာဆိုမနာသူငယ်ချင်းအရင်းများ (အပိုင်း ၁)
Disney မင်းသမီးလေး (10) ယောက်ရဲ့ လူ version လို့တောင် ထင်မှတ်မှားရမဲ့ အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ Rosé
K-Pop ပရိသတ်အကြီးစားတွေဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံထားကြတဲ့ ကမ္ဘာကျော်ဆယ်လီများ
SuperM အဖွဲ့ဝင် Taemin နဲ့ Kai ကြားက သံယောဇဉ်ကိုဖော်ကျုးပြနေတဲ့ ရယ်စရာအဖြစ်အပျက်